Izincwadi zikaKhisimusi, ezimalungana noKhisimusi. Ukukhethwa | Izincwadi Zamanje
Izincwadi zikaKhisimusi, ezimalungana noKhisimusi. Ukukhetha
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Abalobi, Umlando wezincwadi, Amabhuku, I-Novela, Izindaba
Nakho-ke, ekhoneni. Futhi I-Navidad, futhi ekhetheke kakhulu kulo nyaka nayo ikhetheke kangako kodwa eyodwa esinethemba lokuthi ngeke iphinde iphindwe. Nakulokhu futhi kufanele wenze ifayela le- ukukhethwa kokufundwayo ngalesi sikhathi okunikezelwe izincwadi eziningi kangaka. Lokhu kungokwami ​​nge okwakudala kweSpanish, nabokufika bathanda Rilke, Andersen o UStevenson, ezindabeni nakwezinye izindaba zikaKhisimusi.
1 Usuku lwamaKhosi. Izinganekwane ZikaKhisimusi - UFrancisco José Gómez Fernández
2 Izincwadi eziya kumama ngoKhisimusi - uRainer Maria Rilke
3 I-Advent on the Mountain - uGunnar Gunnarsson
4 Isihlahla sonwele saseYurophu —uHans Christian Andersen
5 Isipho sikaKhisimusi - URobert Louis Stevenson
Usuku lwamaKhosi. Izinganekwane zikaKhisimusi - UFrancisco José Gómez Fernández
Izindaba zikaPardo Bazán, uValle-Inclán, uTaboada kanye nezinye ezakudala
Kuncane esikwaziyo — noma mhlawumbe okungcono ukusho ukuthi sinesiko elincane— le Spanish Christmas izindaba. Kepha kukhona. Futhi kule ncwadi ezinye ziqoqwe ngendlela ye izindaba futhi, njengoba kuboniswe kumbhalo ongezansi ophethe wona.
Ngakho-ke sinababhali abanjengo Qeda, Emilia UPardo Bazán, IValle-Inclán noma i-Azorín, ngaphezu kwezinye ezingathandwa kangako njengoRamón de la Cruz, uRuiz Aguilera noma I-Alarcon. Bonke babhala izindaba ezimfushane ezinesihloko sikaKhisimusi lapho bathwebula khona izinkumbulo zomndeni, okuhlangenwe nakho noma ubunzima bempilo.
Izincwadi eziya kumama ngoKhisimusi - URainer Maria Rilke
Imbongi edumile yaseJalimane uRainer Maria Rilke kugcinwe okhethekile futhi kungaphazanyiswa Izincwadi zikaKhisimusi nomama wakhe, uSophie Entz, kusukela ngo-1900 kuya ku-1925, unyaka ngaphambi kokufa kwakhe.
Lezi zincwadi zivelele ezabo okuqukethwe okufanayo kanye nephimbo, ngaphandle kobudlelwano obunenkinga imbongi ebinabo nonina. Zibhalwe ngobumnandi obukhulu futhi ziqukethe, ngokwesibonelo, zithinta ukuthambekela kokuzethemba okusondele kakhulu okufana ne- Isiginesha yembongi: "René". Futhi, futhi unyaka nonyaka, bobabili bayaphinda ukuzibophezela kwabo ekucabangeni omunye nomunye ngehora lesithupha ntambama ngosuku olungaphambi kukaKhisimusi. Lokhu kubhalelana akaze ameNgisho nangesikhathi sempi.
Ukufika ezintabeni - UGunnar Gunnarsson
Lo msebenzi uhunyushelwe ezilimini ezingaphezu kwezingu-10 futhi ithandwa kakhulu emazweni afana Alemania y United States. Kuze kwaphawulwa ukuthi kugqugquzele uHemingway ukuthi abhale Indoda endala nolwandle nokuthi uWalt Disney wayefuna ukumyisa kumamuvi. Futhi umbhali wayo, uGunnar Gunnarsson, unjalo omunye wababhali abakhulu bezincwadi zase-Iceland Ikhulu lama-1955. Ngo-XNUMX waqokelwa iNobel Prize for Literature.
Kuyinto a inoveli emfushane, setha engcolile ubusika kusukela ezintabeni ezisenyakatho-mpumalanga Islandia. I-protagonist yayo, i- Umfundisi uBenedikt, uqala uhambo lwakhe lwendabuko lwe Ukufika ukuze ukutakula kusuka eqhweni kuya kulabo izimvu zomhlambi ezilahlekile futhi ezimiselwe ukufa okuthile. Ephelezelwa ngu inani lakhe elikhulu, inja yakhe nenqama, ungena entabeni eneqhwa ngaphandle kokusola ukuthi, kulokhu, a umphumela okungalindelekile.
Umsinga —Hans Christian Andersen
Ama-Classics amaningi kaKhisimusi, ngakho-ke awunakuphuthelwa umbhali odume kakhulu wezindaba nezinsumansumane waseDenmark: uHans Christian Andersen. Le ndaba yanyatheliswa okokuqala ngo-1844 futhi isilethele udaba lwe isihlahla yini njalo ukulangazelela ukukhula futhi ufeze izinto ezinhle okhohlwa ukuphila ubuhle besikhashana. A i-carpe diem UKhisimusi ngesibonelo semvelo esizocabangisisa, futhi nangaphezulu kulo nyaka, ngokubaluleka kokuphila usuku nosuku nokujabulela lokho onakho.
Isipho sikaKhisimusi - URobert Louis Stevenson
Enye i-classic oyifunde nganoma yiluphi usuku nguStevenson, obhale lokhu izindaba ezimbili ezithandekayo ngawo omabili amaKhisimusi, cishe ekugcineni kwempilo yakhe.
Ku okokuqala kubo sine-protagonist, UMarkheim, oya ku- isitolo se-antique ukuthenga i- isipho UKhisimusi. Futhi okwenzeka kuye lapho emahoreni alandelayo kuzoshintsha ngokuphelele ukudalelwa kwakhe.
Futhi ku okwesibili un isikhulu sesiNgisi, olwa phakathi España ngesikhathi Impi Yokuzimela, uthatha umhlalaphansi ukuze alulame. Uyakwenza ku Izakhiwo phakathi kwezintaba namathafa athakazelisayo. Lapho uzozama ukuthola okhiye be-a Indaba yothando neyesabekayo lapho okwenyama nokomoya kucishe kungahlukaniseki. Kokubili kuhlangana egameni lowesifazane ongaqondakali: Olalla.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Amabhuku » Izincwadi zikaKhisimusi, ezimalungana noKhisimusi. Ukukhetha
Ukukhetha okuhle kakhulu. Ngiyabonga !!
Ukuhlanganiswa okuhle nomsebenzi wokuphenya. Ukukhethwa okuphumelele kakhulu kwezincwadi ngeSpanishi.